Fifindran’ny valanaretina : avy eto Antananarivo avokoa ireo tranga vaovao miisa 209 | NewsMada
Fifindran’ny valanaretina : avy eto Antananarivo avokoa ireo tranga vaovao miisa 209
Mbola lohalaharana ha­trany. Avy eto Antananarivo avokoa ireo nifindran’ny va­lanaretina miisa 209, araka ny tatitry ny CCO, omaly. Ta­haka izany koa, avy eto avokoa ny maro amin’ireo marary mafy « forme grave », miisa 50, na nihena telo aza ka niisa 53 izany teo aloha. Ahitana izany etsy Befela­ta­nana, miisa 26, raha 14 ny eny Andoha­tapenaka ary miisa valo kosa ny eny Anosiala. Iray ny eny Fenoarivo Atsimondrano.
Any Andrainjato Fiana­ran­tsoa ny iray manampy azy ireo. Anisan’ny faritra tsy mbola afa-bela amin’ny co­ronavirus na efa nisy fotoana aza, tsy nahitana izany intsony tany Matsiatra Ambony teo aloha teo.
Mananika ny 4 000 ireo tratran’ny coronavirus eto amintsika
Etsy andaniny, niampy 189 ireo sitrana ka avy eto Anta­nanarivo ny 139 amin’izany. Misy 15 hafa koa naha­feno ny fepetra ho amin’ny fahasitranana any Atsina­nana. Tafa­katra 1 950 izany izao ireo sitrana. Izany hoe efa ho feno 2 000 izy ireo. Miisa 1 799 kosa ireo mbola manaraka fi­tsa­boana sy arahi-maso ny toe-pahasalamany. Tsy nisy ny maty fa mijanona ho 33 izany. Mi­isa 3 782 izany izao ireo ni­fin­dran’ity valanaretina ity ha­tra­min’ny 19 marsa no ho mankaty. Efa hananika ny 4 000 izany amin’izao fo­toana izao. Tafakatra hatrany amin’ny
26 688 kosa ireo fitiliana vita.